Ukukhangela njani kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukukhangela njani kwi-Twitter?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 286
I-Twitter yinkqubo ye-microblogging enelona nani liphezulu lamahlakani okwangoku. Olu hlobo lonxibelelwano luphawulwa ngokunika inkonzo yokunxibelelana ehambelana nemiyalezo emifutshane. Yazalwa njengolunye unxibelelwano olunamandla ngakumbi kunolo lolunye unxibelelwano lwasentlalweni
Nangona kunjalo, kule ndlela yonxibelelwano uneentlobo ezininzi zomxholo, ijolise ikakhulu kwezolonwabo, kodwa nakwiiqonga zeendaba. Ngapha koko, i-Twitter iye yangumthombo ophambili weendaba emhlabeni, ezihlaziywa ngemizuzwana.
Ke, ukuba ufuna ukufumana umxholo othile kwi-Twitter, uya kuba nesixhobo esilula kakhulu ukusisebenzisela yona; isixhobo sokukhangela. Oku kuyafana nokufumana nakweyiphi na inethiwekhi yoluntu okanye nakweyiphi na isoftware, ke uya kuba nolwazi ngokusetyenziswa kwayo. Qhubeka ufunda ukuze wazi ukuba ungayisebenzisa njani.
Fumana umxholo weendaba owufunayo ku-Twitter
Xa ufaka iakhawunti yakho ye-Twitter, Into yokuqala oyibonayo zezona mpapasho zakutshanje zabalandeli bakho kunye neempendulo abazenzileyo. Olona phendlo lulula ungenza ulityibilize umnwe wakho kwiscreen ukuze ukwazi ukuhamba ngexesha lakho lokufumana iifayile ezahlukeneyo ezikhoyo.
Ukuba ungene ngohlobo lwe-desktop lwe-Twitter, unokufumana neendlela ezikwicala lasekhohlo lojongano. Apha ngezantsi kolu luhlu, ucinezela "Bonisa ngakumbi" Uya kufumana ezinye iindlela.
Ngokufanayo, uya kufumana iingcebiso zomsebenzisi oza kuzilandela. Ngoku, kwiprofayile yakho unokuqhuba nezinye iintlobo zophendlo. Kujongano lwayo uyakufumana iiTweets ozenzileyo kunye neempendulo ozenzileyo, ngokunjalo, iimpendulo kwezo tweets. Iifoto kunye neevidiyo kunye nezinto ozithandayo ozinike zona.
Sebenzisa isixhobo sokukhangela
Ngokungena kwi-Twitter uya kuba nakho ukufumana zonke iiTweets kunye neeprofayili ozifunayo ngeyakho isixhobo sophando.
Khangela iiprofayili kunye neeTweets
Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho kwaye uzifumane ngokuthe ngqo kumgca wexesha lakho, unokufumana ibha ye icon ezantsi. Owesibini ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, lowo ubunjwe njengeglasi yokukhulisa, uya kuyisebenzisa ukwenza uphando.
Ngokucinezela uyakufumana uluhlu lweendlela ezifumanekayo ngalo mzuzu. Ukuya phezulu uya kufumana ibha yokukhangela. Chwetheza igama leakhawunti ofuna ukuyikhangela, kwaye iziphumo zokukhangela ziya kuvela kwangoko.
Ecaleni kwale bar yokukhangela uza kufumana i icon emile yegiya. Xa ungena kuyo, uya kuba nakho ukukhetha phakathi kweendlela ezimbini zokukhangela, indawo kunye nokwenza ngokwezifiso.
Xa ukhetha indawo, phakathi kweziphumo zokukhangela uya kubafumana abo basondele kuwe. Ngelixa, ngokobuqu, unokukhetha ukubonisa imeko. Uyakufumana isixhobo sokukhangela kumacandelo athile oqwalaselo lweprofayile yakho, ngenkqubo efanayo echazwe kwifayile ye- imihlathi edlulileyo.
1 Fumana umxholo weendaba owufunayo ku-Twitter
2 Sebenzisa isixhobo sokukhangela
3 Khangela iiprofayili kunye neeTweets
Ndifuna ukwazi indlela yokuphumelela nge-Instagram.
Ndiyifaka njani imifanekiso yam ye-Instagram kwiPinterest?